Danjire Ameeriko oo ka hadlay go'aanka Kenya - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Danjire Ameeriko oo ka hadlay go'aanka Kenya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 19 December, 2012, 19:19 GMT 22:19 SGA
Kenya waxay dhowaan soo saartay amar ay ugu sheegayso dhamaan, dadka qaxootiga ah iyo kuwa magangalya doonka ah ee Soomalida ah in ay ku noqdaan Xeryaha Dhadhaaab. Danjiraha Soomaaliya ee Kenya Maxamed Cali Ameeriko ayaa haddaba ka hadlay arrintan.
Danjiraha Soomaaliye ee magaalada Nairobi, Maxamed Cali Ameeriko.
Dawlada Kenya waxaa ay dhowaan waxay soo saartay amar ay ugu sheegayso dhamaan, dadka qaxootiga ah iyo kuwa magangalya doonka ah ee soomalida ah in ay ku noqdaan Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaaab.
Dawlada Kenya waxaa ay sheegtay in u jeedada Amerkeedaasi u yahay mid ay ku sugayso ammaankeeda.
Waxaa kaloo jirta in dad badan oo soomali ah la xirxiray.
Haddaba Danjiraha Soomalia u fadhiya dalka Kenya, Mohammed Ali Amerika oo u waramay BBC-da ayaa, waxaa uu sheegay in dawladiisu ay dawlada, kenya ay kala hadlayso in go'aankeedaas ay dib u eegto.